Umbuzo: Uzibona njani iintlanzi emanzini-ukuHamba ibhayisekile
Ikhaya » Zomxube » Umbuzo: Uzibona njani iintlanzi emanzini
Uzibona njani iintlanzi emanzini?
Zeziphi iiglasi onokuzibona iintlanzi emanzini?
Wazi njani indawo yokuloba?
Zibonwa phi iintlanzi?
Ngowuphi umbala welensi efanelekileyo emanzini?
Ngaba iiglasi zelanga ezifakwe kwisipili zingcono ekulobeni?
Ngaba iiglasi zokuloba ziyasebenza ngokwenene?
Ungabona njani ngaphantsi kwamanzi ngaphandle kweeglasi?
Ngaba iilensi ezipholileyo zinceda ukubona emanzini?
Ungakwazi ukuntywila ngeendondo?
Ngaba ikonofile itsala iintlanzi?
Ngaba amaqamza athetha intlanzi?
Leliphi elona xesha lilungileyo lokuloba?
Ngaba iintlanzi ziyalala?
Zizimela phi iintlanzi elwandle?
Yeyiphi eyona ntlanzi inkulu kwezakha zabonwa?
Yeyiphi ilensi ilungele ukuloba?
Ngaba iilensi zeGRY zikulungele ukuloba?
Ngaba iilensi eziluhlaza okanye eziluhlaza zingcono ekulobeni?
Jonga intlanzi esebenzayo ezantsi komsinga ukusuka kuyo nayiphi na into engaqhelekanga yonxweme lolwandle, iqhuma okanye enye iprotrusion oyibonayo, efana nothotho lwamatye ajula emanzini. Iintlanzi ziya kubamba kumsinga opholileyo emva kwezithintelo ezifana nezi, ngoko unokuqiniseka ukuba zikhona nokuba awuziboni zisondla.
Iiglasi zepolarized zinceda ukunciphisa ilitha elenziwe lilanga xa libetha emanzini. Ngolu litha luphelile, lukwenza ukwazi ukubona emanzini. Oku kuyinzuzo enkulu kuye nawuphi na umlobi oloba amanzi angekho nzulu kumachibi okanye othanda ukuloba kumanzi aqukuqelayo emilambo kunye nemilambo.
Fumana izitenxo emacaleni agxile kwintlanzi. Khangela incam yendawo ende ephumela echibini, apho ithi ngequbuliso iwele emanzini anzulu. Umphetho jikelele wokhula utsala iintlanzi. Iindawo apho amaplanga awela okanye enze izikhewu ezincinci zinokubamba iintlanzi.
Iintlanzi zifumaneka phantse kuyo yonke indawo apho kukho amanzi anokutya okwaneleyo, ioksijini kunye nokhuselo. Kufuphi nekhaya lakho kufuneka kubekho amanzi amaninzi aneentlanzi ezihlala kuwo. Kodwa ukubamba iintlanzi, okokuqala kufuneka ufunde ukuqonda apho zifihle khona. Asizizo zonke iintlanzi ezinokuphila kuhlobo olunye lwamanzi.
Ukuba uza kuphuma emanzini imini yonke, eyona nto ubheja ngayo ziilensi ezingwevu. Olu hlobo lwelensi lukwafanelekile kumanzi aluhlaza okwesibhakabhaka, ukuthintela ilitha, kwaye ikuvumela ukuba ubone emanzini ngcono.
Izibuko zelanga ezibonisiweyo zilungile kubalobi, njengoko zinceda ukusika ukukhanya ngokubonakalisa ukukhanya kwelanga, okubangela ukubonakala okungcono kunye nokuncinci kwamehlo.
Iiglasi zelanga zokuloba ezipolarized zinokunceda ukukhusela amehlo akho ngokugqibeleleyo. Iiglasi zelanga zokuloba ezipholileyo zinokuvala imisebe yelanga ye-ultraviolet okanye ye-UV, ukuyigcina ingonakalisi amehlo akho. Imitha ye-UV inokwenzakalisa iindawo ezininzi zeliso kuquka nokonakalisa i-cornea yamehlo akho. Babangela kwakhona urhatyazo, iphotokeratitis, nezinye iziphene zamehlo.
Ukuba unxiba iiglasi okanye unxibelelana nawe, unokuwubeka umyalelo wakho kwimaski yokuntywila. Ukunxiba imaski yokuntywila yeyona ndlela ikhuselekileyo yokubona into engaphantsi kwamanzi kunokuvula amehlo omntu, kwaye ifanelekile kuye nabani na ongakwaziyo ukubona kakuhle ngaphandle kweendondo zakhe.
Inyani: Ilitha lelanga elwandle (kunye neminye imiphezulu) iphole kakhulu! Ukongeza, zonke izinto ezibonisiweyo ezivela kwizinto ezingaphezulu kwamanzi zihlukaniswe ngokuyinxenye. Ngeeglasi zelanga ezipholileyo ulwandle lubonakala lucace ngakumbi!
I-Scuba Diving ngeeglasi (izibuko) Hayi awukwazi ukwenza i-scuba diving ngeendondo. Uyilo lweendondo zamehlo kuthetha ukuba iingalo zeglasi ezikrweca phezu kweendlebe zakho azivumeli iplastiki okanye isiketi sesilicon semaski yokuntywila ukuba itywine ngokuchanekileyo phezu kobuso bakho.
Impendulo emfutshane nguewe, intlanzi efana negalikhi, kodwa kukho okungakumbi kunoko. Uhlolisiso lubonisa ukuba ezinye iintlanzi zinezivamvo zokujoja ezinamandla kakhulu. Kuyaziwa ukuba ukuvumba kwentlanzi kubhetele ngokuphindwe kayi-1,000 XNUMX kuneenja. Abalobi bebesebenzisa ikonofile kwisithiyelo sabo amashumi eminyaka kuba inevumba elinamandla.
Iintlanzi zidinga ioksijini ukuze ziphile. Ukuba itanki yakho ilayishwe iikhemikhali ezinobuthi, njengeklorini kunye ne-ammonia, iintlanzi zifumana ioksijini yazo ngokudada phezu komhlaba kunye nokuvuthela amaqamza. Olu luphawu lokuba iintlanzi zakho zisengozini. Njengoko iintlanzi zakho zithatha ioksijini emanzini, zikhupha ikharbon diokside.
Amaxesha alungileyo okuloba kwangethuba ekuseni. 6:00 kusasa ukuya ku-9:00 kusasa kusasa ukuya emva kwemini. 9:00 am ukuya 1:00 emva kwemini ukuya ngorhatya. 1:00 emva kwemini ukuya ku-5:00 emva kwemini
Ngelixa iintlanzi zingalali ngendlela efanayo nezilwanyana ezanyisayo zomhlaba ezilalayo, uninzi lweentlanzi luyaphumla. Uphando lubonisa ukuba iintlanzi zinokuwunciphisa umsebenzi wazo kunye nemetabolism ngelixa zihlala zilumkele ingozi. Ezinye iintlanzi ziyadada endaweni yazo, ezinye zizikhusela kwindawo ekhuselekileyo eludakeni okanye kwiikorale, kwaye ezinye zide zifumane indlwane efanelekileyo.
Kwiindawo eziselunxwemeni, kufutshane nonxweme, umzantsi wolwandle ogqunywe kakhulu yintlabathi kodwa usenokuba namacandelo amatye atyhilekileyo. Iintlanzi zihlala kubunzulu kumanzi aselunxwemeni, kodwa uninzi luhlala kufutshane namazantsi. Uninzi lwazo lutya kufuphi nendawo ekhuselekileyo, njengelitye okanye uqaqa lwekorale, apho lunokulalela khona amaxhoba.
Yeyiphi eyona ntlanzi inkulu eyakha yabanjiswa? Ngokweengxelo ze-IGFA, eyona ntlanzi inkulu eyakha yabanjiswa yayingu-shark omkhulu omhlophe owayenobunzima obungakholekiyo be-2,664 iiphawundi (1,208.389 kg.). Ukufunyanwa kunxweme lwaseCeduna, e-Australia, ngo-1959, kwathatha u-Alfred Dean otyhafayo imizuzu engama-50 ukuphumelela umlo wokulwa nale shark yitoni enye.
Njengoko besesitshilo ngasentla, iilensi zobhedu (ezimdaka okanye ezi-amber) zilungele ukuloba. Kukho enye into ekufuneka uyiqwalasele: iimeko zokukhanya ezikungqongileyo. Nokuba uyaloba okanye awuboni, ukuba kusibekele, kukho amafu okanye "iimeko zokukhanya okuphantsi," ngoko ke uya konwaba ngakumbi xa unxibe iilensi zobhedu.
Iilensi ezingwevu zezona zilungele ukuloba kude nonxweme apho ilanga lishushu kwaye libukhali kuba zibonelela ngokhuseleko oluninzi. Ukuba ujonge ukuvula amanzi kwaye ufuna ukubeka phambili ukuthintela ukukhanya ngaphezu kokuphucula umbala, ingwevu yeyona lens ilungileyo yokuloba.
Kwi-offshore, isipili esiluhlaza yindlela yokuhamba. Kumanzi acocekileyo kunye ne-inshore, isibuko esiluhlaza kunye nobhedu lukhetho olukhulu. Ukukhanya okuphantsi ekuzeni kokusa okanye ngongcwalazi, isipili sesilivere sokuphuma kwelanga sifanelekile. Iilensi ezingwevu zezona zikhethwa kakhulu kwimisebenzi yemihla ngemihla.
Umbuzo: Ngaba iintlanzi zinganxiba iiLensi zoQhagamshelwano
Umbuzo: Kutheni le nto i-Iss isebenzisa iiLensi zamehlo entlanzi
Umbuzo: Yintoni Intlanzi Yamanzi Abandayo
Ngawaphi Amanzi Exesha Leentlanzi zeBetta
Yintoni efunwa ngamanzi eBetta Fish
Yintoni Iintlanzi ezitsiba ngaphandle kwamanzi
Ziziphi Iintlanzi zamanzi abandayo
Umbuzo: Itya Ntoni Intlanzi Emanzini
Umbuzo: Zitya ntoni iintlanzi zamanzi olwandle
Yintoni iqondo lobushushu leBetta Water Fish
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba i-Angel Intlanzi yamanzi amatsha okanye iintlanzi zamanzi etyuwa
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba izinja zingasebenzisa iilensi ezingaboniyo ngoMbala
Ngaba iiLensi zoTshintsho zingasetyenziselwa ukuloba